A tọhapụrụ ụdị ọhụrụ nke Ubuntu Touch OTA-13 na ndị a bụ akụkọ ya | Site na Linux
Guysmụ okorobịa si na ọrụ UBports wepụtara ụbọchị ole na ole gara aga ntọhapụ nke ọhụrụ version nke femụwe update Ubuntu Touch OTA-13 n'ihi na ndị niile na-akwado smartphones na mbadamba nkume ndị ejiri ngwa ngwa dabeere na Ubuntu.
Na ụdị ọhụrụ a emeziwanye na ihe nchọgharị QtWebEngine nchọgharị ka ewebata nke emelitere na ngalaba 5.14 (mbipute 5.11 bụ nke ewepụtara na mbụ), nke mere ka o kwe omume iji mmepe ọhụụ site na ọrụ Chromium na ihe nchọgharị Morph na ngwa weebụ.
Na akara ngosi JetStream2 na WebAss Assembly, arụmọrụ Morph mụbara site na 25%. Emechiela ihe mgbochi na ịhọrọ otu ahịrị ma ọ bụ okwu; ị nwere ike ugbu a tinye dum paragraf na aka ike chunks nke ederede na clipboard.
Ihe nchọgharị tinyekwara ọrụ imeghe onyonyo ebudatara, dọkụmentị PDF, MP3 music na faịlụ ederede iji bọtịnụ "Mepee" na ibe "Mepee ya".
Na nhazi, a na-eweghachite elele akara ngosi na nchịkọta nhọrọl. Enyere ihe yiri nke a na mbu, mana Canonical dochiri ya na nhazi uzo abuo, obere oge tupu njedebe nke ntinye ha na mmepe. Maka nnukwu ákwà, a na-ahapụ ọnọdụ kọlụm abụọ, ma ejiri obere window nwee, a na-egosipụta akara ngosi na-akpaghị aka ugbu a kama ndepụta.
Emeela ọrụ iji gbanwee ihe ndị ahụ si Ubuntu Touch, dị ka shei Lomiri (Unity8) na ihe ngosi, na-arụ ọrụ na postmarketOS na Alpine nkesa, nke a na-enye ọba akwụkwọ usoro musl kama GNU libc.
Mgbanwe ndị a kwadebere kwa emeela ka ọrụ niile dịkwuo mma site na isi koodu ma kwado ikwaga na Ubuntu 20.04 dị ka ihe ndabere maka Ubuntu Touch n'ọdịnihu.
Gbanwere ikwommiri meziri maka niile bụ isi ngwa, mgbe oru ha ugbu a na-egosi na adabako egosi kama oghere ọcha ihuenyo.
Adreesị akwụkwọ ike e gbasaa, ebe i nwere ike ichekwa ihe omuma banyere ubochi omumu. A na-ebufe data agwakọtara na akpaghị aka na kalenda ma na-egosipụta na ọhụrụ ngalaba "Ndi ana-akpo ụbọchị ọmụmụ".
Edegharịrị nhazi nke interface maka edezi kọntaktị na ntinye data dị na mpaghara ọhụụ emeela ka ọ dị mfe na-enweghị ịmegharị keyboard. Ikike ihichapụ ndekọ, ibido oku, ma ọ bụ dee ozi site na iji mmegharị ahụ enyere (mgbe ị na-aga aka ekpe, akara ngosi maka arụmọrụ ndekọ na-apụta).
Ike ịbubata ndepụta kọntaktị na Ubuntu Touch site na itinye faịlụ VCF. Mgbe ị pịrị bọtịnụ "Kpọọ" na akwụkwọ adreesị, nke mepee n'ime interface maka ịkpọ oku, a na-akpọ oku ahụ ozugbo, na-egosighi usoro nkwenye etiti.
Edoziri nsogbu na ederede SMS na ozi MMS, tinyekwara na ndekọ ụda na izipu ozi vidio.
Ubuntu Touch na-arụ ọrụ ugbu a na netwọk IPv6 naanị.
Na ekwentị OnePlus Otu, mkpebi ziri ezi nke ọnọdụ izizi nke mmetụta ihe dị nso na-emejuputaNakwa ihuenyo na-agbanye mgbe ibu ejikọrọ ma ọ bụ kwụpụ, na ihuenyo gbanyụrụ mgbe oku malitere.
Nkwado agbakwunyere maka itinye Nexus 7 2013, Xperia X na OnePlus One ngwaọrụ ịrahụ ụra site na imechi okwu magnet ma na-akpọte ha site na imeghe ikpe ahụ.
Ọtụtụ ngwaọrụ, dị ka Nexus 6P, agbasaala iji kwado bọtịnụ tọọchị na akara ngosi njikwa ike.
Ngwungwu lomiri-ui-toolkit emeela nkwado dị mma maka Qt interface skins na akara ngosi akara ngosi.
Um maliteghachi ngwa ejiri ngwa ngwa mgbe ịmalitere usoro ịmaliteghachi na ọnọdụ asynchronous, nke na-anaghị akụ Lomiri shei.
Emegharịrị mmelite maka OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4 / PRO 5, VollaPhone, Bq Aquaris E5 /E4.5/M10 smartphones.
E jiri ya tụnyere nke gara aga, mmalite nke usoro kwụsiri ike maka Sony Xperia X / XZ na ngwaọrụ OnePlus 3 / 3T amalitela.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » E weputala ụdị ọhụrụ nke Ubuntu Touch OTA-13 ma ndị a bụ akụkọ ya
Onyeikpe na-egbochi mgbochi Trump nke WeChat